Abscessed Tooth (သွားပြည်တည်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Abscessed Tooth (သွားပြည်တည်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Abscessed Tooth (သွားပြည်တည်ခြင်း)
Abscessed Tooth (သွားပြည်တည်ခြင်း) ကဘာလဲ။
သွားပြည်တည်ခြင်းဆိုတာ နာကျင်စွာခံစားရတဲ့ ရောဂါပိုးဝင်ရောက်မှုဖြစ်ပြီး သွားရဲ့အရင်းမှာ ဒါမှမဟုတ် သွားနဲ့ သွားဖုံးရဲ့ကြားမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းအရင်းကတော့ သွားများဆိုးရွားစွာ ပျက်စီးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား အကြောင်းအရင်းတွေကတော့ သွားကို ထိခိုက်မိလို့ ကျိုးပဲ့ထွက်ခြင်း၊ သွားဖုံးရောင်ခြင်းနဲ့ သွားဖုံးရောဂါတွေကြောင့် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီပြသနာတွေဟာ သွားရဲ့ကြွေလွှာတွေကမှာ အပေါက်များဖြစ်ပေါ်စေပြီး ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကို သွားအတွင်းဝင်ရောက်စေပါတယ်။ သွားရဲ့အရင်းမှာ ဖြစ်တဲ့ ပိုးဝင်ခြင်းဟာ သွားရဲ့ဝန်းကျင်က အရိုးဆီကိုလည်း ပြန့်နှံ့သွားစေနိုင်ပါတယ်။
Abscessed Tooth (သွားပြည်တည်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Abscessed Tooth (သွားပြည်တည်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အပူ အအေးဒဏ် မခံနိုင်ခြင်း
မအီမသာ နေမထိထိုင်မသာ ခံစားရခြင်း
အပေါ် အောက် မေးရိုးများ ရောင်ရမ်းခြင်း
သွားရဲ့အတွင်းပိုင်းဟာ ပိုးဝင်ခြင်းကြောင့် လုံး၀ ပျက်စီးသွားတဲ့အခါ သွားကိုက်ခြင်း ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း သက်သာ ပျောက်ကင်းသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုးဝင်ခြင်းဟာ ဆက်ရှိနေပြီး အသားတွေကိုပါ ပျက်စီးစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် အထက်ပါလက္ခဏာတွေ ကြုံရရင် နာကျင်ခြင်း ပျောက်ကင်းသါားမယ်ဆိုရင်တောင် သွားဆရာဝန် ပြသင့်ပါတယ်။
Abscessed Tooth (သွားပြည်တည်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပါးစပ်ထဲမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေများလာရင် သွားမျက်နှာပြင်ပေါ် ကျောက်များဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။
သွားများကို သန့်ရှင်းစွာ မထားရင် အဲ့ဒီကျောက်တွေဆီမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကနေ အက်ဆစ်ဓါတ်တွေ ထွက်လာပြီး သွားနဲ့ သွားဖုံးများကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပြီး ရောဂါဖြစ်စေပါတယ်။
အောက်ပါအချက်တွေဟာ သွားပြည်တည်ခြင်းကို မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
ခံတွင်းသန့်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်း။ သွားများကို ပုံမှန်မတိုက်ရင် သွားကျောက်တွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အချိုဓါတ်၊ ကစီဓါတ်များသော အစာနှင့် အရည်များ သောက်ခြင်း။ သွားကျောက်တွေမှာရှိတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေကို ပိုမိုပေါက်ပွားလာဖို့ အားပေးတာကြောင့် သွားပျက်စီးမှု၊ ပြည်တည်မှုကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်စေပါတယ်။
ယခင်က ဒဏ်ရာရခြင်း၊ ခွဲစိတ်ဖူးခြင်း။ သွားနဲ့ သွားဖုံးထဲက ထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့နေရာမှာ ဘက်တီးရီးယားတွေ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ခံအားနည်းခြင်း။ ဆီးချိုလို ရောဂါရှိနေခြင်း၊ စတီးရွိုက်ဆေးများ၊ ကင်ဆာဆေးများနဲ့ ကုသမှုခံယူနေရခြင်း စတဲ့အခြေအနေတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Abscessed Tooth (သွားပြည်တည်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သွားသန့်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်း။ သွားနဲ့သွားဖုံးတွေကို သေချာစွာ ဂရုမစိုက်ရင် (တနေ့ကို သွားနှစ်ကြိမ်တိုက်ခြင်း၊ သွားကြားထိုးခြင်း စသည်တို့မလုပ်ရင်) သွားများပျက်စီးပြီး ပြည်တည်ကာ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေ ဝင်ရောက်နိုင်ခြေ များပါတယ်။
အချိုဓါတ်များတဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေ (သကြားလုံး၊ ဆိုဒါရည်) ဟာ သွားများမှာ အခေါင်းပေါက်များ ဖြစ်လာစေပြီး သွားပြည်တည်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Abscessed Tooth (သွားပြည်တည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သွားဆရာဝန်ဟာ စမ်းသပ်ကိရိယာများနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရှု ပါလိမ့်မယ်။ သွားပြည်တည်ခြင်းရှိနေရင် ဆရာဝန်က သင့်သွားကို ခေါက်တဲ့အခါ နာပါလိမ့်မယ်။ သွားနဲ့တခုခုကို ကြိတ်ဝါးရင်၊ အံကြိတ်ထားရင် နာကျင်မှု ပိုဆိုးလာခြင်း ရှိမရှိ မေးပါလိမ့်မယ်။ သွားဖုံးတွေ နီရဲရောင်ရမ်းနေရင် ဆရာဝန်ဟာ သွားပြည်တည်ခြင်းကို သံသယ ရှိပါလိမ့်မယ်။
ပြည်တည်တဲ့နေရာဝန်းကျင်က သွားတွေရဲ့ အခြေအနေကို သိရအောင် ဓါတ်မှန်လည်း ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
Abscessed Tooth (သွားပြည်တည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ပိုးဝင်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေဖို့၊ သွားကို မပျက်စီးစေဖို့၊ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့ စတာတွေဟာ ကုသခြင်းရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုးဝင်ခြင်းကို ပျောက်ကင်းဖို့ ပြည်တွေကို ဖောက်ထုတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သွားအရင်းကို အပေါက်ဖောက်ပြီး စီးထွက်စေတဲ့နည်းကို သုံးပါတယ်။ ပိုးဝင်ခြင်း ပျောက်ကင်းသွားပြီးတဲ့အခါ မကောင်းတော့တဲ့ အသားတွေကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ ခွဲစိတ်ရတတ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ သွားကို ဖုံးပါတယ်။
သွားကိုနုတ်ပြီး အောက်ခြေက ပြည်တွေကို စီးထွက်စေတာလည်း ရှိပါတယ်။
ရောဂါပိုးဝင်တာပျောက်အောင် ပဋိဇီဝဆေးတွေလည်း ပေးပါတယ်။ နာကျင်မှုကို သက်သာအောင် ဆားရည်နွေးနွေးနဲ့ အာလုတ်ကျင်းတာ၊ မိမိဖာသာ ဝယ်သောက်နိုင်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ သုံးစွဲတာ စတာတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ရောင်ရမ်းမှု နာကျင်မှုတွေကို သိပ်အားမပြင်းတဲ့ လေဆာနဲ့ ကုသနိုင်ပါတယ်။ လူနာကို နာကျင်မှုလျော့စေပြီး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေပါတယ်။
ဘယ်လို နေထိုင်မှုပုံစံနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက သွားပြည်တည်ခြင်းအတွက် အထောက်အကူ ပြုသလဲ
ဖလူအိုရွိုက်ပါဝင်တဲ့ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ တနေ့ကို သွားနှစ်ကြိမ်တိုက်ပါ။
သွားကြားထဲ သန့်ရှင်းတဲ့ ပိုးချည်မျှင်ကို သုံးပြီး နေ့စဉ် သန့်ရှင်းပါ။
၃-၄ လ ကြာတိုင်း သွားပွတ်တံကို လဲလှယ်ပါ။
အချိုဓါတ်များတဲ့ သရေစာတွေကို လျှော့ချပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင်စားသုံးပါ။
ပိုးသေစေတဲ့ ဖလူအိုရိုက်ပါတဲ့ ဆေးရည်များနဲ့ အာလုတ်ကျင်းပြီး သွားများပျက်စီးခြင်းကနေ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
Tooth abscess. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tooth-abscess/home/ovc-20185938. Accessed July 24, 2017.
Dental Health and the Abscessed Tooth. http://www.webmd.com/oral-health/guide/abscessed-tooth#1. Accessed July 24, 2017.
Dental abscess. http://www.nhs.uk/conditions/Dental-abscess/Pages/Introduction.aspx. Accessed July 24, 2017.
ခံတွင်းနံ့ဆိုး သက်သာစေဖို့ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတွေက ဘာတွေများလဲ
လုပ်နေမိတတ်တဲ့ အလွဲလေးတွေ ။ ။